Rasberi Ihe ngosi mmịfe, ụzọ dị ọsọ iji mepụta ihe ngosi | Akụrụngwa n'efu
Rasberi ihe ngosi mmịfe, a ngwa ngwa ụzọ ike n'ihu
Ihe eji Raspberry Pi dị ọtụtụ na ọtụtụ na ndị ọzọ. N'ezie n'ihi aha aha ahụ, ọtụtụ n'ime unu ga-eche na anyị na-eche ihu sistemụ arụmọrụ ọhụrụ maka Raspberry Pi, mana eziokwu bụ na anyị na-eche ihu na ọrụ ọhụrụ karịa sistemụ arụmọrụ.
Rasberi Ihe ngosi mmịfe bụ ndụdụ nke Raspbian nke ahụ na-agbanwe Rasberi Pi anyị n'ime igwe dị ike iji wepụta nkwupụta na onyonyo nke ụdị ọ bụla. Ihe dị ka Kodi na-eme ugbu a na multimedia ụwa.
Ihe ngosi mmịba nke Raspberry abụghị naanị na ọ na-ebipụta onyonyo na ngosipụta na ihuenyo zuru oke kamakwa ọ nwere usoro nke edemede nke na-enye ohere nkwukọrịta na ụdị sava ọ bụla, n'ụzọ dị otú a na ọ bụrụ na anyị nwere Raspberry Pi 3, anyị nwere ike jikọọ na ihe nkesa ọ bụla ma wepụ ma ọ bụ jiri ihe oyiyi na vidiyo sitere na sava ahụ. All na-enweghị nwere USB karịa ike USB nke utu Pi na ileba anya ma ọ bụ na ihuenyo.
Ndabere nke Rasberi Ihe ngosi mmịfe bụ Debian Stretch, otú anyị nwere ike ikwu na utu ihe ngosi mmịfe ka a Raspbian kachasị ma ọ bụ gbanwee maka ọrụ a.
Utu Pi bụ minipc nke na-abawanye na mpaghara azụmahịa. Nke a bụ n'ihi utilities dị ka onye anyị na-enweta na utu Ihe ngosi mmịfe.
Iji gbanwee Rasberi Pi anyị na ihe ngosi mmịfe nke anyị ga-eme budata eserese ISO nke sistemụ arụmọrụ ma anyị ga - eme ya dekọọ onyonyo na kaadị microsd dị ka onyonyo nkịtị. Mgbe ahụ, anyị ga-agbanye ngwaọrụ ma soro usoro nkuzi sistemụ, nke ga-abụ ntọala njikọ na ihe nkesa ọzọ iji wepụta onyonyo ma ọ bụ ụdị multimedia ndị ọzọ.
Onwe m achọtara m na ọ na-atọ m ụtọ, ọ bụghị naanị maka ụlọ ọrụ kamakwa maka ndị ọrụ chọrọ ịmepụta ihe ngosi yana aka ole na ole nke Raspberry Pi na sọftụwia a, ha nwere ike ịmepụta ya na-enweghị ịbụ ọkachamara kọmputa Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Rasberi ihe ngosi mmịfe, a ngwa ngwa ụzọ ike n'ihu